Dalka masar ayaa waxaa lagu xiray dad u dhashay dalka soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Sida ay qoreen Warbaahinta dalka Masar, 11 ruux oo Somali ah iyo 10 Itoobiyaan ah ayaa lagu xiray dalka Masar, kuwaasi oo doonayay inay si sharcidaro ah ku galaan dalka Masar.
Wargeyska Alyoom ee ka soo baxa dalka Magaaalda Qaahira ee dalka Masar, ayaa sheegay 21 qof ee Somalida iyo Itoobiyaanka isugu jiray inay rabeen inay galaan dalka Masar, waxaana lagu xiray Magaalada Luxor ee dalkaasi.
Dadkaan ayaa la sheegay inay yihiin tahriibayaal doonayay inay ka soo gudbaan dalka Masar, inkastoo aysan u suuragelin qorshihii ay doonayeen ee ku aadanaa inay dalkaasi ka sii baxaan.
Muhaajiriin isugu jira Sudanese, Soomaali, Eritrea, iyo Itoobiyaan ayaa mararka qaar taga magaalada Qaahira kuwasoo doonaya inay si sharci darro ah ku galaan dalalka Liibiya iyo Yurub.
Muhaajiriintaan Soomaalida iyo Itoobiyaanka isugu jira ayaa hada waxa ay ku xiran yihiin Xabsi ku yaallo dalkaasi Masar, lamana oga waxa ay muteysan doonaan.
Muddooyinkii dambe waxaa soo badatay dadka Somalida iyo Itoobiyaanka ee doonaya inay ka tahriibaan dalka Masar si ay ugu sii gudbaan Libya, kadibna Talyaaniga ay sii galaan.
Warbixin uu soo saraay afhayeenka Mileretiga ee dowlada Masar Maxamed Samir ayaa lagu sheegay 2,215 qof oo muhaajiriin ah in la qabtay illaa bishii September, waxaana lagu qabtay magaalooyinka ku teedsaan badda Mediterranean iyo xuduudda u dhaxeysa Masar iyo Liibiya.